Standardization Adreesị 101: Uru, Ụzọ, na Ndụmọdụ | Martech Zone
Standardization Adreesị 101: Uru, Ụzọ, na Ndụmọdụ
Kedu mgbe ikpeazụ ịchọtara adreesị niile dị na listi gị na-eso otu usoro na enweghị mmejọ? Ọ dịghị mgbe, nri?
N'agbanyeghị usoro niile ụlọ ọrụ gị nwere ike ime iji belata mperi data, leba anya n'ihe gbasara ogo data - dị ka asụpe ụgha, oghere efu, ma ọ bụ oghere ndị na-eduga - n'ihi ntinye data akwụkwọ ntuziaka - bụ ihe a na-apụghị izere ezere. N'ezie, Prọfesọ Raymond R. Panko na nke ya bipụtara akwụkwọ mere ka ọ pụta ìhè na njehie data akwụkwọ akụkọ karịsịa nke obere datasets nwere ike ịdị n'etiti 18% na 40%.
Iji luso nsogbu a ọgụ, nhazi adreesị nwere ike ịbụ nnukwu ngwọta. Ngosipụta a na-akọwa otú ụlọ ọrụ nwere ike isi rite uru site na ịhazi data, yana usoro na ndụmọdụ ha kwesịrị ịtụle iji weta nsonaazụ echere.
Gịnị bụ Adreesị Standardization?
Ịhazi aha adreesị, ma ọ bụ ịhazi adreesị, bụ usoro nke ịchọpụta na ịhazi ndekọ adreesị kwekọrọ n'ụkpụrụ ọrụ nzi ozi a ma ama dị ka e depụtara na nchekwa data ikike dị ka nke Ọrụ nzi ozi United States (USPS).
Ọtụtụ adreesị anaghị agbaso ọkọlọtọ USPS, nke na-akọwa adreesị ahaziri ahazi dị ka, nke akpọpụtara n'ụzọ zuru ezu, debiri site na iji ndebiri ọkọlọtọ Service Postal Service, ma ọ bụ dị ka egosiri na faịlụ ZIP+4 dị ugbu a.
Ụkpụrụ izi ozi nzi ozi
Ịhazi adreesị na-aghọ mkpa dị mkpa maka ụlọ ọrụ nwere ndenye adreesị nwere ụdị na-ekwekọghị ekwekọ ma ọ bụ dị iche iche n'ihi nkọwa adreesị efu (dịka ọmụmaatụ, ZIP+4 na koodu ZIP+6) ma ọ bụ akara edemede, casing, spacing, na mperi mkpope. Enyere ọmụmaatụ nke a n'okpuru:
Dị ka a na-ahụ na tebụl, nkọwa adreesị niile nwere otu njehie ma ọ bụ ọtụtụ ma ọ dịghị nke na-emezu ụkpụrụ USPS achọrọ.
Standardization adreesị ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na ndakọrịta adreesị na nkwado adreesị. Ọ bụ ezie na e nwere otu ihe ahụ, nkwado adreesị bụ maka ịchọpụta ma ndekọ adreesị kwekọrọ na ndekọ adreesị dị na nchekwa data USPS. Njikọ adreesị, n'aka nke ọzọ, bụ maka ijikọ data adreesị abụọ yiri ya iji chọpụta ma ọ na-ezo aka na otu ihe ma ọ bụ na ọ bụghị.
Uru nke Adreesị Nhazi
Ewezuga ihe doro anya kpatara ihe adịghị ọcha data, adreesị nhazi nwere ike inye ọtụtụ uru maka ụlọ ọrụ. Ndị a gụnyere:
Chekwa oge adrees na-enyocha: na-enweghị nhazi adreesị, ọ nweghị ụzọ a ga-esi enyo enyo ma ọ bụrụ na ndepụta adreesị ejiri maka mgbasa ozi ozi ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọ bụrụ na eweghachiri mail ma ọ bụ na-enwetaghị nzaghachi ọ bụla. Site na ịhazi adreesị dị iche iche, enwere ike ịzọpụta nnukwu awa mmadụ site na ndị ọrụ na-enyocha ọtụtụ narị adreesị ozi maka izi ezi.
Belata ụgwọ nzipu ozi: Mgbasa ozi ozi ozugbo nwere ike ibute adreesị na-ezighi ezi ma ọ bụ ezighi ezi nke nwere ike ịmepụta okwu ịgba ụgwọ na mbupu na mkpọsa ozi ozugbo. Ịhazi adreesị iji melite ndakọrịta data nwere ike ibelata ozi ndị eweghachiri ma ọ bụ ndị enyefeghị ya, na-ebute ọnụego nzaghachi ozi ozugbo dị elu.
Wepụ adreesị oyiri: ụdị dị iche iche na adreesị nwere mperi nwere ike ime ka izipu ozi-e ugboro abụọ na kọntaktị nke nwere ike belata afọ ojuju ndị ahịa na ihe oyiyi ika. Ihicha ndepụta adreesị gị nwere ike inyere ụlọ ọrụ gị aka ịchekwa ego nnyefe efu.
Kedu ka esi hazie adreesị?
Ọrụ nhazi adreesị ọ bụla kwesịrị izute ụkpụrụ USPS ka ọ baa uru. N'iji data emepụtara na Tebụl 1, nke a bụ ka data adreesị ga-esi pụta na nhazigharị.
Ịhazi adreesị gụnyere usoro nzọụkwụ anọ. Nke a gụnyere:
Bubata adreesị: kpokọta adreesị niile site na isi mmalite data - dị ka akwụkwọ akụkọ Excel, ọdụ data SQL, wdg - n'ime otu mpempe akwụkwọ.
Data profaịlụ iji nyochaa mperi: Mepụta profaịlụ data site na iji ghọta oke na ụdị mperi dị na listi adreesị gị. Ime nke a nwere ike inye gị echiche siri ike nke mpaghara nsogbu nwere ike ịmezi tupu ịme ụdị nhazi ọ bụla.
Hichaa mperi iji zute ntuziaka USPS: Ozugbo achọpụtara mperi niile, ị nwere ike hichaa adreesị ma hazie ya dịka ntuziaka USPS siri dị.
Chọpụta ma wepụ adreesị oyiri: iji chọpụta adreesị oyiri ọ bụla, ị nwere ike ịchọ ọnụọgụ abụọ na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ nchekwa data gị ma ọ bụ jiri kpọmkwem ma ọ bụ fuzzy kenha iji dedupe ndenye.
Ụzọ nke Standardizing Adreesị
Enwere ụzọ abụọ dị iche iche maka ịhazi adreesị na listi gị. Ndị a gụnyere:
Ederede akwụkwọ ntuziaka na ngwa
Ndị ọrụ nwere ike iji aka chọta scripts na-agba ọsọ na mgbakwunye iji hazie adreesị sitere na ọba akwụkwọ site na iche iche
Ebe nchekwa koodu: GitHub na-enye ndebiri koodu na USPS API mwekota nke ị nwere ike iji nyochaa na normalize adreesị.
Usoro mmemme ngwa: Ọrụ ndị ọzọ nwere ike ijikọ site na API tugharia, hazie, na kwado adreesị ozi-e.
Ngwa ndị sitere na Excel: tinye-ins na ngwọta dị ka YAddress, AddressDoctor Excel Plugin, ma ọ bụ Excel VBA Master nwere ike inyere gị aka ịtụgharị na ịhazi adreesị gị n'ime ihe ndekọ data gị.
Uru ole na ole nke ịbanye n'ụzọ a bụ na ọ dị ọnụ ala ma nwee ike ịdị ngwa ịhazi data maka obere datasets. Otú ọ dị, iji edemede ndị dị otú ahụ nwere ike ịdaba karịa ihe ndekọ puku ole na ole ma si otú a adabaghị maka nnukwu datasets ma ọ bụ ndị gbasaa na isi mmalite dị iche iche.
Ngwanrọ nkwenye adreesị
Enwere ike iji nkwenye adrees na-anọghị na shelf na nhazi ngwa ngwa iji hazie data. Ọtụtụ mgbe, ngwa ndị dị otú ahụ na-abịa na ngwa nkwado adreesị kpọmkwem - dị ka nchekwa data USPS agbakwunyere - ma nwee profaịlụ data na-apụ apụ na ihe nhicha ya yana algọridim dabara adaba iji hazie adreesị n'ogo.
Ọ dịkwa mkpa na ngwanrọ nwere CASS asambodo sitere na USPS wee zute oke izizi achọrọ na usoro nke:
Ntinye koodu 5-nọmba - itinye koodu ZIP dị nkeji ise efu ma ọ bụ ezighi ezi.
Ndokwa ZIP+4 – na-etinye koodu ọnụọgụ anọ efu ma ọ bụ ezighi ezi.
Ihe ngosi nnyefe obibi (RDI) - ikpebi ma adreesị ọ bụ ebe obibi ma ọ bụ azụmahịa.
Nkwenye ebe nnyefe (DPV) - ikpebi ma enwere ike ibunye adreesị ma ọ bụ na ọ bụghị ruo na ọnụ ụlọ ụlọ ma ọ bụ ụlọ.
Ahịrị njem emelitere (eLOT) - nọmba usoro nke na-egosi ihe mbụ nke nnyefe emere na nsonye mgbakwunye n'ime ụzọ ụgbọelu, na koodu ịrị elu / rịdata na-egosi usoro nnyefe dị nso n'ime nọmba usoro.
Njikọ Sistemụ Ntụgharị Adreesị dị (LACSLink) - usoro akpaghị aka nke ịnweta adreesị ọhụrụ maka obodo ime obodo nke mebere usoro mberede 911.
SuiteNjikọ® na-enyere ndị ahịa aka inye ozi gbasara azụmahịa ka mma site n'ịgbakwunye ozi nke abụọ (suite) ama ama na adreesị azụmahịa, nke ga-enye ohere ịnyefe USPS usoro ebe ọ na-agaghị ekwe omume.
Na ndị ọzọ…
Uru ndị bụ isi bụ mfe ọ nwere ike nyochaa na ịhazi data adreesị echekwara na sistemu dị iche iche gụnyere CRM, RDBMs na ebe nchekwa Hadoop na data geocode iji wepụta ụkpụrụ longitude na latitude.
N'ihe gbasara oke, ngwa ọrụ ndị dị otú ahụ nwere ike na-eri ihe karịrị ụzọ nhazi adreesị akwụkwọ ntuziaka.
Kedu usoro ka mma?
Ịhọrọ usoro ziri ezi maka ịkwalite ndepụta adreesị gị dabere kpamkpam na olu ndekọ adreesị gị, nchịkọta teknụzụ, na usoro iheomume.
Tags: +4Koodu zip nke 5adreesị ọchamwepụ adreesịadreesị dọkịtaadreesị parsingadreesị ọkọlọtọadreesị nkwadongwanrọ nkwenye adreesịAPICassdataladdernkwado ebe nnyefedpvelotemeziwanye ahịrị njemGitHublacslinknjikọ sistemụ ntụgharị adreesị ebe enwere ike ịchọtapostalprordirdrmihe ngosi nnyefe obibisuitelinkọrụ nzipu ozi.ghausps apiGịnị bụ adreesị standardizationyaddresskoodu mpagharakoodu mpaghara
Fahad Fareed bụ onye njikwa azụmaahịa ngwaahịa na Nweta data - ụlọ ọrụ ngwanrọ na-eduga mkpebi na ogo data data. Site na ahụmịhe ya na-arụ ọrụ na ETL na ụlọ ọrụ dị mma data, Fahad na-edepụta nghọta na ndụmọdụ kachasị ọhụrụ maka ndị mmepe na ndị isi ụlọ ọrụ C-suite iji nyere ha aka ime mkpebi ka mma na ịbịaru nso atumatu njikwa data.